လေဖြတ်တော့မလိုဝေဒနာခံစားနေရတဲ့သူကိုတွေ့ရင် သင့်အနေနဲ့ ဒီလိုတွေကူညီပေးနိုင်… – Trend.com.mm
လေဖြတ်တော့မလိုဝေဒနာခံစားနေရတဲ့သူကိုတွေ့ရင် သင့်အနေနဲ့ ဒီလိုတွေကူညီပေးနိုင်…
တကယ်လို့များသင်နဲ့အတူသွားလာနေတဲ့သူ၊သင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတစ်ယောက်ယောက် လေဖြတ်ချင်သလိုဖြစ်နေတဲ့အရိပ်အယောင်တွေ တွေ့ရရင် ကူညီဖို့အတွက် ဒီအချက်လေးတွေကို သတိရသင့်ပါတယ်။ရုတ်တရက်လေဖြတ်တာဟာ အသက်ကြီးတဲ့သူတွေမှာဖြစ်နိုင်သလို အသက်အရွယ်မရွေးဖြစ်နိုင်ချေရှပါတယ်။ဒီတော့ လေဖြတ်တော့မယ်ဆိုတာ ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ?
F : မျက်နှာအကြောဆွဲသလိုဖြစ်လာမယ်
A : လက်မောင်းကြွက်သားတွေအားနည်းလာမယ်။မလှုပ်နိုင်တော့သလိုဖြစ်နေမယ်
S : စကားပြောရတာခက်ခဲလာမယ်
T : ဆေးရုံကားချက်ချင်းခေါ်ဖို့ မမေ့ပါနဲ့
ဒီအချက်တွေကတော အဓိကအချက်တွေပါ။နောက်ထပ်အချက်တွေကတော့ ခြေထောက်ကြွက်သားတွေအားနည်းလာပြီးလမ်းမလျှောက်နိုင်ဖြစ်လာမယ်။သတိတွေေ၀၀ါးလာမယ်။အမြင်တွေေ၀၀ါးလာမယ်။ခေါင်းတွေထိုးကိုက်လာမယ်စတဲ့အချက်တွေက လေဖြတ်ချင်တဲ့လက္ခဏာလို့ Neurovascular Intervention Center က Dr.Vipul Gupta က ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဒါဆို သင့်အနေနဲ့ ဘယ်လိုကူညီပေးနိုင်မလဲ ကြည့်လိုက်ရအောင်
*ပိုကောင်းလာမလားဆိုပြီး တစ်ခြားလက္ခဏာတွေစောင့်မနေပါနဲ့။အပေါ်မှာပြောခဲ့တဲ့လက္ခဏာတွေအတိုင်းမြင်နေရပြီဆိုရင် ချက်ချင်းဆေးရုံကားခေါ်ပါ။မြန်လေ ကုသနိုင်စွမ်းပိုကောင်းလေပါပဲ။မိနစ်တိုင်းက တန်ဖိုးရှိနေပါတယ်။မိသားစုဆရာဝန်ခေါ်တာတွေ၊စောင့်နေရတာတွေမှာအချိန်မဖြုန်းပါနဲ့။နီးစပ်ရာဆေးရုံကိုအမြန်ပို့ပါ။
*လူနာကသတိလစ်နေပြီး အသက်ရှုနေတုန်းဆိုရင် ဘေးတစ်စောင်းလှဲလိုက်ပြီး ဦးခေါင်းအောက်မှာ လက်ကိုဖြည်းညင်းစွာထားပေးပါ။(ပုံထဲကလို)
*လူနာက အသက်မရှုတော့ဘူးဆိုရင် ချက်ချင်း CPR လုပ်ပါ။များသောအားဖြင့် CPR လုပ်စရာမလိုဘူးဆိုပေမဲ့ လူနာက သတိလစ်မေ့မျောနေတဲ့အပြင် အသက်လည်းမရှု၊နှလုံးလည်းမခုန်တော့ဘူးဆိုရင် ဆေးရုံကားစောင့်နေတုန်း CPR လုပ်ပေးထားင့်ပါတယ်။
*စားစရာ၊သောက်စရာ ဘာတစ်ခုမှမတိုက်ပါနဲ့၊မကျွေးပါနဲ့။ဘာဆေးဝါးမှလည်း မတိုက်ပါနဲ့။
*အသက်ရှုရလွယ်အောင် အကျီတွေဖြေလျော့ထားပါ။တင်းကျပ်မနေပါစေနဲ့ ။
အထူးသတိထားရမှာကတော့ လေဖြတ်ချင်သလိုဖြစ်နေတဲ့လူနာကိုတွေ့တာနဲ့ ဆေးရုံကားအရင်ခေါ်ထားဖို့ပါပဲ။ဆေးရုံမြန်မြန်ရောက်လေ ပြန်ကောင်းနိုင်ချေများလေပါ။ဆေးရုံကားစောင့်နေတဲ့အချိန်မှ အပေါ်မှာပြောထားသလို အချက်တွေအတိုင်းပြုမူပြီး ကူညီပါ။
တကယျလို့မြားသငျနဲ့အတူသှားလာနတေဲ့သူ၊သငျ့ပတျဝနျးကငျြကလူတဈယောကျယောကျ လဖွေတျခငျြသလိုဖွဈနတေဲ့အရိပျအယောငျတှေ တှရေ့ရငျ ကူညီဖို့အတှကျ ဒီအခကျြလေးတှကေို သတိရသငျ့ပါတယျ။ရုတျတရကျလဖွေတျတာဟာ အသကျကွီးတဲ့သူတှမှောဖွဈနိုငျသလို အသကျအရှယျမရှေးဖွဈနိုငျခရြှေပါတယျ။ဒီတော့ လဖွေတျတော့မယျဆိုတာ ဘယျလိုသိနိုငျမလဲ?
F : မကျြနှာအကွောဆှဲသလိုဖွဈလာမယျ
A : လကျမောငျးကွှကျသားတှအေားနညျးလာမယျ။မလှုပျနိုငျတော့သလိုဖွဈနမေယျ
S : စကားပွောရတာခကျခဲလာမယျ
T : ဆေးရုံကားခကျြခငျြးချေါဖို့ မမပေ့ါနဲ့
ဒီအခကျြတှကေတော အဓိကအခကျြတှပေါ။နောကျထပျအခကျြတှကေတော့ ခွထေောကျကွှကျသားတှအေားနညျးလာပွီးလမျးမလြှောကျနိုငျဖွဈလာမယျ။သတိတှဝေဝေါးလာမယျ။အမွငျတှဝေဝေါးလာမယျ။ခေါငျးတှထေိုးကိုကျလာမယျစတဲ့အခကျြတှကေ လဖွေတျခငျြတဲ့လက်ခဏာလို့ Neurovascular Intervention Center က Dr.Vipul Gupta က ပွောပွခဲ့ပါတယျ။ဒါဆို သငျ့အနနေဲ့ ဘယျလိုကူညီပေးနိုငျမလဲ ကွညျ့လိုကျရအောငျ
*ပိုကောငျးလာမလားဆိုပွီး တဈခွားလက်ခဏာတှစေောငျ့မနပေါနဲ့။အပျေါမှာပွောခဲ့တဲ့လက်ခဏာတှအေတိုငျးမွငျနရေပွီဆိုရငျ ခကျြခငျြးဆေးရုံကားချေါပါ။မွနျလေ ကုသနိုငျစှမျးပိုကောငျးလပေါပဲ။မိနဈတိုငျးက တနျဖိုးရှိနပေါတယျ။မိသားစုဆရာဝနျချေါတာတှေ၊စောငျ့နရေတာတှမှောအခြိနျမဖွုနျးပါနဲ့။နီးစပျရာဆေးရုံကိုအမွနျပို့ပါ။
*လူနာကသတိလဈနပွေီး အသကျရှုနတေုနျးဆိုရငျ ဘေးတဈစောငျးလှဲလိုကျပွီး ဦးခေါငျးအောကျမှာ လကျကိုဖွညျးညငျးစှာထားပေးပါ။(ပုံထဲကလို)
*လူနာက အသကျမရှုတော့ဘူးဆိုရငျ ခကျြခငျြး CPR လုပျပါ။မြားသောအားဖွငျ့ CPR လုပျစရာမလိုဘူးဆိုပမေဲ့ လူနာက သတိလဈမမြေ့ောနတေဲ့အပွငျ အသကျလညျးမရှု၊နှလုံးလညျးမခုနျတော့ဘူးဆိုရငျ ဆေးရုံကားစောငျ့နတေုနျး CPR လုပျပေးထားငျ့ပါတယျ။
*စားစရာ၊သောကျစရာ ဘာတဈခုမှမတိုကျပါနဲ့၊မကြှေးပါနဲ့။ဘာဆေးဝါးမှလညျး မတိုကျပါနဲ့။
*အသကျရှုရလှယျအောငျ အကြီတှဖွေလြေော့ထားပါ။တငျးကပျြမနပေါစနေဲ့ ။
အထူးသတိထားရမှာကတော့ လဖွေတျခငျြသလိုဖွဈနတေဲ့လူနာကိုတှတေ့ာနဲ့ ဆေးရုံကားအရငျချေါထားဖို့ပါပဲ။ဆေးရုံမွနျမွနျရောကျလေ ပွနျကောငျးနိုငျခမြေားလပေါ။ဆေးရုံကားစောငျ့နတေဲ့အခြိနျမှ အပျေါမှာပွောထားသလို အခကျြတှအေတိုငျးပွုမူပွီး ကူညီပါ။
ပိတ်ရက်မှာ အာလူးကင် မွှေးမွှေးလေး စားကြမယ့်သူတွေ လက်မထောင်
Dating အဆင့်လောက်နဲ့ပဲ လူတစ်ယောက်အပေါ်စိတ်ထားတတ်ဖို့…